टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ्गको आयोजनमा 'वाकाथन' सम्पन्न
ARCHIVE, CORPORATE » टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ्गको आयोजनमा 'वाकाथन' सम्पन्न
'शिक्षामा समानता आजको आवश्यकता'भन्ने मुलनाराको साथ टाटा मोटर्सले तथासिप्रदी ट्रेडिङ्गले आज राजधानीमा सफलताका साथ वाकाथन सम्पन्न गरेको छ ।
टाटा र यसको नेपाल स्थित आधिकारीक बिक्रेतासिप्रदी ट्रेडिङ्ग को संयुक्तप्रयासमाआयोजितवाकाथन को प्रमुख उद्देश्य नेपालीशिक्षाजगतमा सकारात्मक योगदान पु¥याउनु रहेको जनाइएको छ ।
यस कार्यक्रममा सहभागी हरेक व्यक्ति बराबर रू. १०००।- का दरले टाटा र सिप्रदीद्वारा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
करिब पाँच सय जनाको उत्साहपुर्ण सहभागिता भएको वाकाथन टाटा मोटर्स को शोरूम रहेको थापाथली बाट सुरू भई त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर हुँदै करिब ४ कि. कि.को दुरीपार गर्दै पुन थापाथली स्थित टाटाको शोरूममा आएर टुंगिएको थियो ।
कार्यक्रममा टाटा मोटर्स नेपालको लागि कन्ट्रि म्यानेजर अजित नारायण सिंहले आफुहरूले यस बर्षपनि नेपालको शिक्षा जगतको विकास र विस्तारको लागि केहि नयाँ प्रयास गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा सम्बन्धि व्यापक चेतनाको विकासको लागि ठूलो भूमिका खेल्ने र अरुलाई पनि यस्तै कार्य गर्न उत्प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसैगरी सिप्रदी ट्रेडिङ्गका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ सम्शेर राणाले सिप्रदीले सधैं सामाजिक उत्तर दायित्व प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्न कटिबद्ध रहेको जनाउनु भयो । त्यसैगरी उहाँले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन पनिगर्नुभयो ।
एक बर्ष अगाडि टाटा र सिप्रदीले संयुक्त रूपमा शिक्षाको लागि टेष्ट ड्राइभ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जसमा हरेक टेष्ट ड्राइभ बराबर रू. ५००।- शिक्षा क्षेत्रको लागि योगदान गरेको थियो ।
यस बर्षको वाकाथन पनि यहि प्रयासको निरन्तरता हो ।
टाटा मोटर्स (वार्षिक)४२ अर्व डलरको कारोवार गर्ने अन्तराष्र्टि«य कम्पनीहो जसले कार, युटिलिटी गाडीहरु, वस, ट्रक अनि सुरक्षामाप्रयोग हुने गाडीहरु उत्पादन गर्छ । यो भारतको सवैभन्दा ठूलो अटोमोवाइलकम्पनीहो र १०० अर्व डलरको कारोवार रहेको टाटा ग्रुपको एउटा हाँगाहो ।७६ सहायककम्पनीहरु मार्फत टाटा मोटर्स वेलायत., दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र इन्डोनेसियामा सञ्चालित छ । वेलायतको स्थापितज्यागुअर ल्याण्ड रोभर पनि टाटा मोटर्स अन्तरगतउत्पादन हुन्छ । अनियसले दक्षिण कोरियामा टाटा डेउ नामक कार उत्पादन गर्छ । कम्पनीको भारतमा फियाटसँग संयुक्तऔद्योगिक भेन्चर– लगानीपनि रहेको छ । टाटा मोटर्स (वस ट्रक जस्ता) कमर्शियल गाडीमा भारतीयवजारमा नेतृत्वदायीभूमिकामा छ । पेसेञ्जर गाडीको विक्रीमापनि टाटा अगाडि नै रहेको छ । यसका ९० लाख गाडीहरु भारतीय सडकमा गुडिरहेका छन् । कम्पनीले दिगो र उपयुक्तखालको अटोमोवाइलप्रविधिको आविस्कारमाध्यानदिदै आएको छ । यसको अनुसन्धान र विकास केन्द्रहरु भारत, वेलायत, इटाली र दक्षिण कोरियामा रहेका छन् । अर्को जमानाकाग्राहकलाई ध्यानमा राखेर टाटा मोटर्स नयाँखालकाउत्पादनल्याउन कटिवद्ध भएर लागको छ । टाटाका कार, बस र ट्रकहरु, युरोप, अफ्रिका, मध्यएसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वि एसिया, दक्षिण अमेरिका, अष्टेलिया, रुस र पूर्वी यूरोपका देशहरुमाविक्रीवितरण हुन्छ ।
सिप्रदी अटोमोटिभ र सम्वन्धित व्यवसायमा काम गर्ने नेपालको सवैभन्दा ठूला र सम्मानित व्राण्डहरु मध्य एउटा हो । ३४ वर्षदेखि कार्यरत सिप्रदीको वार्षिक कारोवार ३५ करोड अमेरिकी डलर भन्दा वढी छ र यसका कारोवार तिव्रगतिमा वढ्दै गएको छ । सिप्रदी अटोमोवाइल, उर्जा, लुव्रिकेन्ट, वित्तीय सेवा र उपकरणको व्यवसायमा आवद्ध रहेको छ । यसका७५० जनाकर्मचारी छन् अनि ६५० जना सहयोगीकर्मचारी छन् । उनीहरु उत्कृष्ट वस्तु र सेवा पु¥याउने एउटै उद्धेश्यका साथकामगरिरहेका छन् जसले सिप्रदीका व्रान्ड भ्यालु वढेको छ । सिप्रदी टे«डिङ प्रा.लि सन् १९८२ देखि नेपालमा टाटा मोटर्सका आधिकारिक विक्रेता रहँदै आएको छ । यो आइएसओ ९००१–२००८ प्रापककम्पनीहा । यसको नेपालमा सवभन्दा ठूलो विक्रीतथा सेवा केन्द्रहरु छन् । यसका देशभरि टाटा मोटर्सका कमर्शियल गाडीमा समर्पित १८ विक्रीकार्यालय र २४ सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् । यसका पेसेञ्जर गाडीमा समर्पित २० शोरुम र २५ सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् ।